Wararka - Astaamaha Xir -qaatayaasha caadiga ah
Astaamaha Xirfadlayaasha caadiga ah
1. Awoodda hadda ee qabtaha xabagta xabagta waa weyn tahay
Tani waxay inta badan ka tarjumaysaa awoodda qabqablayaasha hillaaca si ay u nuugaan xad -dhaafyada hillaaca ee kala duwan, xad -gudubyada ku -meel -gaadhka ah ee ku -meel -gaadhka ah, iyo ka -shaqaynta xad -dhaafka ah. Awoodda socodka hadda ee qabqablaha xabagta oksaydhka ee uu soo saaray Chuantai ayaa si buuxda u buuxisa ama xitaa dhaafta shuruudaha heerarka qaranka. Tilmaamayaasha sida heerka dheecaanka qadka, awoodda nuugista tamarta, 4/10 nanosecond dulqaadka saamaynta sare ee hadda jirta, iyo 2ms awoodda mawjada laba jibbaaran ayaa gaadhay heerka hoggaaminta gudaha.
2. Astaamaha ilaalinta ee aadka u fiican ee qabqablayaasha xabagta zinc
Soo -qabtaha xabagta oksaydhka waa badeecad koronto oo loo isticmaalo in laga ilaaliyo qalabka korontada ee kala duwan ee nidaamka korontada waxyeelada xad dhaafka ah, waxayna leedahay waxqabad ilaalin oo wanaagsan. Sababtoo ah dabeecadda aan tooska ahayn ee volt-ampere ee saxanka waalka zinc oxide waa mid aad u wanaagsan, sidaa darteed dhowr boqol oo microampere hadda ah ayaa ku dhaafi kara korantada shaqada ee caadiga ah, way fududahay in la naqshadeeyo qaab dhismeed aan bannaanayn, si ay u yeelato difaac wanaagsan waxqabadka, miisaanka yar, iyo cabbir yar. sifo. Marka ay korantada xad-dhaafka ahi soo gasho, qulqulka hadda ka socda saxanka waalka ayaa si xawli ah u kordhaya, isla markaasna baaxadda xad-dhaafka xad-dhaafka ah ayaa xaddidan, oo tamarta korantada xad-dhaafka ah waa la sii daayaa. Intaas ka dib, saxanka waalka zinc oxide wuxuu ku noqdaa xaalad iska caabin sare leh, si nidaamka korontadu si caadi ah u shaqeeyo.
3. Waxqabadka shaabadaynta ee qab -qabte xabagta zinc waa wanaagsan yahay
Qaybta qabashadu waxay qaadataa jaakad isku-dhafan oo tayo sare leh oo leh hawl gabow wanaagsan iyo hawo-qabad wanaagsan, iyo tallaabooyin ay ka mid yihiin xakamaynta ciriirinta giraanta shaabadaynta iyo ku-daridda shaabad. Jaakadda dhoobada ah waxaa loo adeegsadaa sidii shaabad wax lagu shaabadeeyo si loo hubiyo xiridda la isku halleyn karo iyo waxqabadka xasilloonida ee qabqablaha.
4. Astaamaha farsamo ee dadka qabta xabagta oksaydhka
Inta badan tixgeli saddexda arrimood ee soo socda:
Force Xoogga dhulgariirka;
Pressure Cadaadiska ugu badan ee dabaysha ee ku dhaqma qofka qabta
End Dhamaadka sare ee xariggu wuxuu xambaarsan yahay xiisadda ugu badan ee la oggol yahay ee siligga.
5. Wax -qabad -siinta wanaagsan ee qab -qabte zinc oxide
Soo -qabtaha xabagta oksaydhka ah ee aan cillad lahayn wuxuu leeyahay iska caabin wasakhaysan oo sarreeya.
Heerka hadda ee masaafada gurguurta ee lagu qeexay heerka qaranka waa:
AreaClass II aagga wasakhda dhexdhexaadka ah: masaafada u dhexaysa 20mm/kv
⑵ Heerka III aagga wasakhaynta culus: masaafada u dhexaysa 25mm/kv
⑶ Fasalka IV, aagga wasakhaysan oo aad u culus: masaafada u dhexaysa 31mm/kv
6. Wuxuu aad ugu kalsoon yahay hawlwadeennada xabagta xabagta xabagta
Kalsoonida hawlgalka muddada dheer waxay ku xiran tahay tayada badeecada iyo in xulashada badeecaddu ay tahay mid macquul ah. Tayada badeecadeeda waxaa inta badan saameeya saddexda dhinac ee soo socda:
A. Caqli -galnimada qaab -dhismeedka guud ee xadhigga;
B Astaamaha Volt-ampere iyo sifooyinka iska-caabbinta gabowga ee filtarka oksaydhka
C Waxqabadka shaabadaynta ee qabqablaha.
7. U dulqaadashada inta jeer ee awoodda
Sababo kala duwan awgood oo ah hal-ku-dhigga dhulka, saamaynta awoodda dheer-dheer iyo daadinta culeyska nidaamka korantada, waxay sababi doontaa kororka korantada soo noqnoqoshada korantada ama soosaarka xad-dhaafka ku-meel-gaarka ah oo leh baaxad weyn. Xirxiyuhu wuxuu u adkeysan karaa soo noqnoqoshada awoodda muddo cayiman. Awoodda kordhinta danab